हिमाल खबरपत्रिका | प्रधानमन्त्रीका बिझाउने बोली
प्रधानमन्त्रीका बिझाउने बोली
प्रधानमन्त्री नै 'मपाईं' स्वभावका भएपछि जनताले दुःख नपाउने कुरै भएन। अरूको चित्त बुझाएर सम्मान आर्जन गर्नुपर्नेमा आफैं दंगदास पर्ने मान्छे रहेछन्। सय दिनको शैली...'म' (३–९ माघ) मा उनको चर्तिकला पढ्दा रमाइलो लाग्यो।
बोलीमै सीमित ओलीका वाणी जनता रिझाउने भन्दा चिढ्याउने खालका छन्। समस्याले आक्रान्त जनतासँग हावादारी गफ चुट्न उनलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। दुःखमा मल्हम लगाउलान् भनेको त उल्टै नुनचूक छर्किंदै हिंडेका छन्।
लीलाराज शर्मा, इमेलबाट
प्रधानमन्त्री ओली साइकल चढेको तस्वीर देख्दा झ्नक्क रीस उठ्यो। अरू वेला सर्वसाधारणलाई पेटीमा उभ्याएर सडक खुला पारी सवार हुने उनले साइकलमा 'पोज' दिएको पटक्कै सुहाएन। हिम्मत भए साकइलमै हिंडेर देखाउन्!
समा नेपाल, इमेलबाट
ओलीका चुट्किलाले जनता हँसाउन नसक्नुले पनि उनी असफल भइसकेको पुष्टि हुन्छ। उनको 'मधुमास' ले निराशा थपेको छ। कहिलेकाहीं त लाग्छ, उनी देशको दुरवस्थाप्रति सन्तुष्ट छन्। उनले चाहेमा मधेश आन्दोलन र भारतसँगको समस्या तुरुन्त समाधान हुनुपर्ने हो। कतै देशलाई अन्योलको भुमरीका खसाल्नुमा उनकै हात त छैन?
ओलीका अनेक वहाना
नीलाम्बर आचार्यसँगको अर्न्तवार्ता 'यो नेतृत्वको संकट हो' (३–९ माघ) रोचक लाग्यो। उनले चामत्कारिक रूपमा देश निर्माण नभए पनि प्रगति देखाउन एक महीना काफी हुने बताएका छन्। अल्छी र काम नगर्नेले मात्रै आफूसामु विघ्नबाधा देख्छ। गरेर देखाउनेलाई केहीले पनि छेक्दैन। बेतुकका बात मारेर समय बर्बाद गर्नुको सट्टा ओलीले परिणाममुखी काममा हात हालेको भए राम्रो हुन्थ्यो।
असिम जीसी, इमेलबाट
भीजे भएदेखि नै म छुल्ठिम गुरुङको फ्यान थिएँ। उनी असाध्यै सुन्दर र प्रतिभाशाली लाग्छिन्। 'नोभेम्बर रेन' मा राम्रो अभिनय गरेकी उनी अब गायनमा पनि जम्ने लक्षण देखियो। 'खसेको तारा' गीतले यसैको संकेत गर्छ। उनीबारे पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो।
सुरज मल्ल, इमेलबाट
देश बिग्रिएकै भ्रष्टाचारले हो। घूस नखुवाई त सरकारी कार्यालयमा काम नै हुन्न। न्यायालयमा समेत घूसपैठ चलेपछि पीडित कहाँ जाने? 'सर्वोच्चमा घूसको उजुरी' (३–९ माघ) मा अप्सरा कोइरालाको अनुभव सुन्दा विरक्त लाग्यो। तर, उनले सप्रमाण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उजुरी र अख्तियारमा निवेदन दिएकी रहिछन्। उनले न्याय पाउनै पर्छ।
बाबुकाजी महर्जन, इमेलबाट
अदालती भ्रष्टाचारमा कसैको नजर पुग्दैन। भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो। न्याय पाउने ठाउँमै अन्याय हुन्छ भने अरू निकायको के कुरा गर्नु? अदालतले पैसा पेल्न सक्नेको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने सुनेको छु। यतिविघ्न घृणित काम बन्द होस्।
शेरबहादुर, रमेश, इमेलबाट
लाहुरबाट धनको सट्टा औषधि बोकेर आउने बारपाकका धनीराम घले वास्तवमै मनका धनी रहेछन्। औषधि अभावमा रोग पालेर बसेका गाउँलेको मर्म बुझने उनी जस्ता कमै हुन्छन्। बुढेसकालमा पेन्सन थाप्दै आनन्दले जीवन गुजारा गर्नुको सट्टा उनी अरूको औषधिमुलो गर्दा रहेछन्। उनको बुढेसकाल सार्थक बनेको छ। 'लाहुरे डाक्टर बा' (३–९ माघ) प्रेरणादायी लाग्यो।
अरुण सिंह, इमेलबाट
मधेश आन्दोलन मधेशवासीकै लागि घाँडो भइरहेको कुरा 'प्रगतिमा बाधक' (३–९ माघ) बाट थाहा पाइयो। व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् भने विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। यातायात अवरुद्ध हुँदा कामकाजमा ठूलै बाधा परेको छ। आन्दोलनले मधेशको विकासमा अड्चन ल्याएको छ। यस्तो आन्दोलनको अर्थ छैन।
गीता तिवारी, इमेलबाट
'प्रगतिमा बाधक' (३–९ माघ) शीर्षक समाचारमा प्रकाशित तस्वीरले ध्यान खिच्यो। मधेशतिर गोरुका सिङ नै रंगीन हुन्छन् या रङ लगाइन्छ? मधेश नगएकाले म छक्क परेकी छु।
आशा डंगोल, इमेलबाट